योगभूमिले जन्माएका युवा योगीहरु - "BE BORN AGAIN"
Home » लेख » योगभूमिले जन्माएका युवा योगीहरु
समय योग को हो । युग योगको हो । र यो बेला दोस्रो विश्व योग दिवसको हो । कुनै समय थियो भगवान शिवले गौरीशंकर हिमालको शीतलछहारी मूनि माता पार्वतीलाई तन्त्र र योग विद्या आफैले बताउनु भएको थियो । त्यहि गौरीशंकर हिमाल संगै अनेकौं योगी तपस्विहरुले आफ्नो साधना आराधना गरेको ठाउँ नेपाल हो । कुरा योग कै हो र योगमा हालचाल काम गरिरहेका युवा योगीहरुको ।
बितेको दुई वर्षमा देशले धेरै सक्रिय र जल्दाबल्दा योगीहरु पाएको छ । दशैभरी योग ध्यान प्राणायाम , आयुर्वेदको प्रचार प्रचार । प्राकृतिक जीवन प्रति समाज आकर्षित भैरहेको देखिन्छ । यसले यो स्पष्ट भएको छ कि नेपाली भूमि मा चलिरहेको साधनाले शनै शनै परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ ।
हुनत योगी सार्वकालिक रुपमा युवा नै रहन्छ तर पनि समयको शब्दलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा युवा सम्बोधनले एक लक्षित समूहलाई निर्देश गर्छ । म आफै सानै देखि संस्कृत तथा योगको विद्यार्थी हूँ । समय संगै योग अध्यात्मलाई बुझ्दै अगि बढें हरेक परिस्थितीमा आफुलाई समायोजन गर्न सकें । यी सम्पूर्ण क्षमता अध्यात्म साधनाले नै दिएको हो । नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने विश्वका गुरु आदि शिव योगिश्वर नै पहिलो योगी हो समय युग र परिस्थिती संगै त्रेतामा श्रृंगी,वाल्मिकी,विश्वामित्र, आदि र द्वापरमा व्यास, आदि ले आफ्नो साधना क्षेत्र बनाएको ठाउँ नेपाल हो । जहाँबाट योगको मूल धारा बहेको स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ । समयको काल खण्डमा पशुपतिनाथ,गोरक्षनाथ,फल्गुनन्द,स्वर्गद्धारी प्रभु,खप्तड बाबा, गलेश्वर बाबा, नरहरीनाथ,कृष्णानन्द परमहंस आदि मध्यकालका योगीहरु हुन । आधुनिक समयमा नेपालमा युवा योगीबाहेक विचका विशिष्ट सन्यासी योगीहरु पनि रहेका छन् जसमा ः— स्वामी चन्द्रेश , स्वामी ज्ञानानन्द, डा. स्वामी रामानन्द, स्वामी लोकानन्द , काली बाबा , आदि र वर्तमानका साधक युवा योगीहरुमा स्वामी कमलनयन,चैतन्य कृष्ण , चिन्तामणी योगी , योगी विकाशानन्द ,योगी सोमराज, स्वामी श्रीधामशरण,कृष्ण स्वामी,डा.राजु. आदि चल्तीमा छन् । जो नेपाली भूमिमा योगको गरिमा बुझाउन हर सम्मत प्रयास गरिरहेका छन् ।
योग साधना र योगलाई बुझेका धेरै साधक तथा योगीहरुलाई नेपालले अँगाल्ने मौका पाएको छ । तर पछिल्लो समयमा नेपालको पाल्पा जिल्लामा जन्मिएका डा. हरीप्रसाद पोख्रेल यस क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्ति हुन । झट्ट हेर्दा भर्खरको युवा जस्तो देखिने श्वेत वस्त्र संगै फेसबुुकको
खातामा मनसंगै हरी खोज्दा छिपछिप दाह्री संगै देखिने डा. हरी योगीले ५० बसन्त लगभग पार गरिसकेका छन् । योेग मिसन नेपाल
संस्थाको माध्यमबाट आजभन्दा १० वर्ष पहिलेदेखि नै देशैभर योग तथा आयुर्वेदलाई प्रचार प्रसारमा ल्याएर विश्व योग दिवस मनाउने तथा हाल आएर विश्वमै पहिलो पटक नेपाल योग पञ्चाङ्ग निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन उनी । भारतको गोरखपुरबाट योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन पश्चात उनको जीवन साधनामय हुन पुगेको थियो र त्यही समय देखि लागेका थिए समाजलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागी । हाल काठमान्डौमा रहेर योग तथा आयुर्वेद चिकित्सालयको माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै रोगीहरुलाई सेवा पुर्याईरहेका डा. हरी कालान्तरमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा योग आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने तरखरमा रहेका छन् । वर्तमान समयमा योगलाई प्रचार प्रसार गर्ने प्राकृतिक चिकित्सालाई जनमानसमा पुर्याउने अनेक साधक योगीहरु छन् । तर ती साधकहरुको भिडमा डा. हरिप्रसाद पोख्रेलको नाम विशिष्ट श्रेणीमा आउने गर्दछ ।
संस्कृति, संस्कार , ध्यान , र प्रवचनमा मुख्य रुचि देखिने चैतन्य कृष्ण पनि यहि अभियानका एक गहना हुन । उनीसंग पनि मेरो भेट केही वर्ष पहिले सत्मार्ग अभियान नेपालकै प्रशिक्षणका क्रममा सुनवलमा भएको थियो । मेरो एफ.एम रेडियोमा बोल्ने अनुभव ६ वर्ष जतिको छ त्यही क्रममा अन्तर्वाताको समय मिलाएको थिए चैतन्य कृष्ण संग । स्याङ्जामा हुर्के बढेका
चैतन्य विज्ञान विषय संगै अगि बढ्दा बढ्दै अध्यात्ममा रुमल्लिएका थिए । भारतका प्रतिष्ठित उच्च कोटीका सालीन योगी मानेर चिनिने गीताप्रेस गोरखपुर संग सम्बन्धित स्वामी रामसुखदास संग सम्बन्धित बताउँछन् उनी आफुलाई । मीठो बोल्ने शैली र शालीन ब्यक्तित्वका कारण उनी कान्तिपुर टेलिभिजनको आध्यात्मिक प्रवचन संगै नेपालभरी चिनिएका हुन् । सबैभन्दा पहिले नेपाल भूमि र राष्ट्रलाई माया गर्नु पर्छ भन्ने भावना राख्ने चैतन्य कृष्ण आफ्नै उत्तरबाहीनी गण्डकी भूमि स्याङ्जामा कालिगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानका माध्यमबाट देशैभरी काम गर्ने जमर्कोमा छन् । नेपाल र नेपालीमा राष्ट्रप्रेम र संस्कृतिप्रति माया जागोस भन्ने अभिप्रायले नेपाल महिमागान यज्ञ गर्न लागेको कुरा केही दिन पहिले मात्र उनीद्वारा नै मलाई अवगत भएको थियो । केही समय संस्कृतिले उजाड जस्तो बनेको भूमि नेपालमा अहिले आएर यस्ता आसलाग्दा युवा योगीहरुले चलाइराखेको आ—आफ्नै अभियानले भोलिको समाजलाई एक नमूना र विश्वमै अध्यात्मदेश को रुपमा चिनाउन मद्दत पुग्ने पक्का छ ।
नेपाल हिन्दू विद्यापीठका संस्थापक योगी चिन्तामणी संग मेरो चिनजान एक अन्तर्वाताकै क्रममा भएको थियो उनी नेपालका अन्तराष्ट्रिय स्तरमै नाम कमाई सकेका योगी हुन् । विदेशका अनेक विश्वविद्यालयहरुमा आगन्तुक प्राध्यापकको रुपमा काम समेत गरिरहेका योगी एक आध्यात्मिक अभियन्ता हुन् । दाङमा हुर्के बढेर सानै देखि संस्कृत अध्ययन गरेका चिन्तामणि नाथ सप्रदायको षडंग
योगलाई आफ्नो दैनिक साधना बनाएका छन् । ध्यान, योग, संस्कृत, आदि विषयमा गहन अध्ययन र प्रशिक्षण दिने योगी जीवन जीउने उत्कृष्ट सूत्रहरु बताउँछन् । संस्कृत र अंग्रजी दुबै विषयमा उस्तै प्रवल खुबि भएका चिन्तामणी देशैभर संस्कृत र अंग्रेजी मिश्रित शिक्षा प्रणालिको गुरुकुल चलाउने जमर्कोमा छन् हाल सम्म हिन्दूविद्यापीठका तीनवटा शाखा खोलिसकेको र यसलाई देशैभर फैलाउने उनको उद्देश्य रहेको छ । आध्यात्मिक पत्रिकाका सम्पादक तथा अनेक पुस्तका लेखक चिन्तामणि एक कुशल साहित्यकार पनि हुन साहित्यका माध्यमबाट अध्यात्मलाई उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने उनी उत्कृष्ट बालगीत र कविता पनि लेख्दछन् ।
नेपालमा रहेर एक युवाहरुमा आध्यात्मिक क्रान्ति जगाउन सफल एक योगी दार्शनिक हुन योगी विकाशानन्द । मनोक्रान्ति नेपाल नामक अभियान बाट । संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नुछ । भन्ने नारा लिएर आफ्नो अभियान थालेका विकाशानन्दका अनेकौं पुस्तक सर्बाधिक विक्रिको सूचिमा रहेका छन् । रेकि साधना तथा पूर्वीय योग कुण्डलिनीलाई दैनिका साधना बनाएका योगी एक विवाहित साधक हुन् । उत्कृष्ट बोल्ने क्षमता र तर्कका कारण उनी नेपाल समाज तथा नेपाली युवा माझ लोकप्रीय छन् । आफूलाई परम्परागन योगी भन्दा आधुनिक योगी भन्न रुचाउने उनी हाँसे
रै अरुको समस्या सुल्झाउन खप्पीस छन् । मनोक्रान्ति नेपालका माध्यमा बाट विभिन्न योग शिविर साधना शिविर र मोटिवेशनका माध्यमबाट अनेका युवालाई विश्व किर्तीमान राख्न सक्ने हैसियतको बनाउनेमा सम्पूर्ण श्रेय विकाशानन्दको नै रहेको छ । आमा बुबा तथा आफन्त कोइ नभएका योगी मन्दिरमा भेटिएका हुन् । उनको पालन पोषण काठमान्ठौ कै एक परिवारले गरेको थियो । हाल उनी नेपालभर आध्यात्मिक क्रान्ति गरीरहेका छन् ।
आज भन्दा तीन वर्ष पहिले हो मैले योगि सोमराजलाई चिनेको । त्यतिखेर उनी भारतको वृन्दावनमा अध्ययन संगै योगका शिविरहरु संगै आफ्नो अभियानमा ब्यस्त थिए । पूर्ण रुपमा भेट सत्मार्ग अभियान नेपालले हेटौडामा राखेको वर्ग प्रशिक्षण मा अझ हामीहरुको घनिष्टता बढेको थियो । सत्मार्गको अभियान र हाम्रो सोंच मिल्ने भएको हुनाले सत्मार्ग अभियानका संगठन प्रमुख खेम आचार्य ले हाम्रो भेट गराउन मद्दत गरेका थिए । योग र गोरक्षा को मूल धारालाई चपक्कै समातेका योगी
सोमराज आफू देश , राष्ट्र धर्म संस्कृतिका लागि ज्यान सम्म दिन सक्ने खुबि आफूले दिने प्रशिक्षण आदिमा स्पष्टै देखाउछन् । प्राकृतिक जीवनशैली ,योगमय पद्धति , दैनिक साधना गर्न सके जीवनले तुरन्तै मोड लिन सक्छ भन्छन् उनी । गौ द्धारा निर्माण हुने अन्यान्य औषधीहरु समेत आफ्नो आश्रम नेपालगंजमा बनाएर देशैभर निर्यात गर्ने गरिरहेका सोमराज निकट भविष्यमा गोतीर्थ मीसनबाट देशैभर गौरक्षा अभियान चलाउने तयारीमा छन् । नाथ परम्परा र नरहरीनाथलाई आफ्नो आदर्श बताउने सोमराज स्वामी नरहरीनाथ को जस्तै जोश र उत्साह देखाउँछन् ।
करीब तीस वर्ष ननाघेका सोमराज अहिले गो तीर्थ मीसन नेपाल काठमान्डौ आश्रममा रहेर स्कूल, आदिमा संस्कार एवं योगको प्रशिक्षण दिइराखेका छन् । योग तथा गौमहिमा महाविज्ञान नामको पुस्तक समेत प्रकाशित गरीसकेका उनी भन्छन् । योग एक जीवन पद्धति हो । जो आजीवन चलिरहन्छ र जीवन पश्चात पनि योगको अहम् भूमिका मुक्ति अर्थात मोक्ष सम्म चलिरहेको हुन्छ । तसर्थ योग विश्वको उत्कृष्ट पद्धतिमा सूचिकृत भैसकेको छ । योग जीवनमा आनन्द जोड्ने माध्यम, आत्मालाई परमात्मामा एकाकार गर्ने माध्यम , स्वस्थ जीवन जीउने उत्कृट माध्यम हो ।
भारतीय दार्शनिक तथा वैज्ञानिक महर्षि महेश योगी २०३६ सालतीर नेपाल आउँदा भनेका थिए ूल्भउब ितय ीभबम तजभ धयचमिू महर्षि महेश योगीको यो भनाई , हाम्रा इतिहास पूराण आदिले स्पष्ट बताएको साधनास्थली हिमवत्खण्ड को महिमा र अब नेपालले लिनु पर्ने भार पनि यहि हो जस्तो मलाई लाग्छ । किनकी धारा माथीबाट नै तल जान्छ तसर्थ विश्वको उच्च सगरमाथा हिमाल र हिमालमै आफ्नो वासस्थान भएका शिवको गरिमामय देश भएका कारण यी र यस्ता सम्भावनाहरुले स्थान पाउने कुरामा कुनै शंका नै छैन ।
सन् २०१३ तीर म हरिद्वार जाँदा गायत्री परिवारले आफ्ना कार्यकर्ता र नेपाली गरी करीव १०० जना जतिको टोली बनाएर बाग्मती सफाई अभियानमा पढाउने जमर्को गरेको थियो । विषेश कारणवस त्यस समूहमा म आउन सकिन । बाग्मती सफाई अभियानमा काठमान्डौमा रहेर आफ्नो संस्था मानव उत्कर्ष नेपाल र सरकारपक्षको सहभागीता गराउने अहम भूमिका निभाई नरहेका थिए अर्का योगी डा. राजु अधिकारीले हरिद्धारमा रहेको देव संस्कृति विश्वविद्यालयबाट योग विषमा विद्याबारिधी गरेका राजु केही वर्ष पहिले मात्र हरिद्धार छोडेर नेपाल छिरेका हुन् । मैले राजु अधिकारीलाई चिनेको २०१३ मै हो तर भेट भने धेरै पछि मात्र भएको थियो ।
नेपालमा रहेर योगको क्षेत्रमा वर्तमान समयमा अहम भूमिका निभाउने अर्का हस्ति हुन डा. राजु अधिकारी । नेपाल सरकारका सचिव देखि लिएर हरेक तह र तप्कासम्ममा योगको स्वाद चखाई राखेका राजुको बोली निकै मिठासिलो छ र प्रभावशाली पनि । उनी योग प्रशिक्षक संगै एक उत्कृट मोटीवेटर पनि हुन । नेपालमा रहेर छोटो समय मै उत्कृष्ट स्थान बनाइसकेका राजुले योग संग सम्बन्धित तीन पुस्तक लेखि
सकेका छन् । पहिलो पुस्तक खाने कसरी पीउने कसरी , दोस्रो योग पनि गरौं भोग पनि गरौं र तेस्रो तपाइका लागि योग रहेको छ । आजको वैज्ञानिक युगमा मान्छे पुरातन परम्परालाई मान्न वैज्ञानिक तथ्य नै खोज्छ तसर्थ अनुसन्धान र प्रमाणित कुरालाई अगि सारेर बोल्ने राजु आजको युगमा योग संगै भोग पनि आवश्यक बताउँन् ।
नेपाल योग भूमि हो भन्ने कुराको पुष्टि वेद पुराण इतिहासले बताइ रहँदा पुरातत्व हिसाबले पनि यसलाई चिनाउन लागि पर्ने बेला आएको यस खण्डमा यस्ता जल्दाबल्दा योगीहरुको अगुवाई सार्थक हुन जरुरी छ । एक वर्ष पहिलमात्र हो नेपालकै पहिलो जगतगुरु बाल सन्त मोहनशरण देवाचार्यले ऐतिहासिक रुपमा चतराधाम कोशीलाई प्राचिन हरिद्वार भएको पुष्टि गराई नेपालमा पनि कुम्भ मेला लाग्नु पर्छ भन्ने विचार सहित विद्वान समूहमा राखेर आफ्नो कामलाई शिखरमा पुर्याएका थिए । मानिदै र पूजिदै आएका धार्मिक स्थल र पुराना जिर्ण मन्दिरहरुमा उत्खनन तथा वैज्ञानिक परीक्षण गरी त्यसको महिमालाई उजागर गर्न सम्पूर्ण योगमार्गी,संस्कृतिमार्गी,अध्यात्ममार्गी एक हुन जरुरी छ । र त्यसको अगुवाई योगमा चलिरहेका साधकहरुबाट नै सम्भव छ किनकी युग योगको हो ।
अस्ति भर्खर दुई महिना जति संस्कार योग आदि प्रशिक्षण प्रवचन दिएर हरिद्धार आईपुग्नु भएका डा. विशालानन्द संग भेट भो । बुटवल,पाल्पा र गोर्खामा योग तथा संस्कार सिकाउने शिक्षकको खाँचो भएको कुरा थाहा भो । दिन—दिनानुदिन योग र संस्कारको चर्चा बढीहँदा परिवर्तनको समय आएको महसुस भैरहेको छ । ठाउँ ठाउँमा गुरुकुल खोलिनु संस्कार तथा संस्कृतिमा जनमानसको झुकाव देखिनुले हामी जस्ता योगमार्गीलाई आफ्नो अभियान चलाउन सहज हुने पक्का पक्की छ । तर समाजमा दुईचार दिन योगको आसनमात्र सिखेर आफुलाई महान ठान्ने हरीलठ्ठक योगीहरुको पनि कमि नभएकोले समाजलाई सचेत बनाउने जिम्मेदारी पनि रहेको छ । बोर्डिङले नै संस्कृत पढाउने, उनीहरुलाई नै योग शिक्षकको आवश्यकता हुने । चौधरी ग्रुप जस्तो प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय कम्पनीले गुरुकुल खोलेर योग, ध्यान , संस्कृत शिक्षाको प्रवाह सुरु गरिरहेको यो प्रारम्भिक अवस्थालाई सरकारले चाँडै नै चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।
योगी सोमराजले विद्यालयहरुमा योग सिकाई रहँदा , राजु सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरुकै बीचमा ब्यस्त छन् । एक महिना जति भो अर्का जल्दाबल्दा योगी श्रीधामशरण पनि गाउँ गाउँमा योगको महिमालाई विस्तार गर्दै हिडीहेका छन् । उनी पनि एक योग गुरु हुन जो परम्परागत तरीकाले योगलाई फैलाउने अभियानमा छन् ।
हाम्रो देश संग सिमा जोडीएको देश भारतमा योगको चहलपहल चर्चाको शिखरमा छ । योगलाई आफ्नो अभियान बनाएर जनचेतना फैलाइरहेका अनेकौं योगीहरुको समय पश्चात योगलाई बुझ्ने मान्छे सरकारमा गएपछि मात्र योग शिखरमा पुग्न सकेको हो त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्रि मोदी सहित श्री श्री रवि शंकर र रामदेवलाई गएको छ । त्यस्तै भोलिको दिनमा नेपाल र नेपालीको यो पुण्ड्य भूमिमा पनि हामीले विश्वमै चिनाउन पहिले पनि योगको धारा यहिँ रहेको र अब त्यसलाई निरन्तरता दिन धर्म निरपेक्ष भन्दा पनि योगराष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण संस्कृतिअनुरागी र योगीहरु एक भएर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनकी योग कुनै जाति , सप्रदाय, र विचारको नभई एक स्वतन्त्र पद्धति हो । माथी उल्लेख भएका योगीहरु एक प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन यसको अलावा पनि अनेक साधक साधीका तथा योगीहरु यसक्षेत्रमा काम गरिरहेका छन र निकट भविष्यमा उनिहरु तपाइको घरदैलोमा आफ्नो अभियान लिएर आउदैछन् ।
नेपालमा योग तथा आयुर्वेद्को चर्चा गरिरहंदा सरोकारवालाले नेपालभरी नै सम्पूर्ण गाउँ गाउँ मा योगको महिमा सहित सबैलाई निरोगी जीवन बाँचेर जीवन मुक्त हुने माध्यम सिकाउन लागे । फेरी पनि नेपाल पुण्ड्य भूभि भएको अनुभूति सारा नेपालीले गर्ने थिए ।
नोट:- लेख पढ़ीसकेपछि सुझाब तथा अन्य योगिहरुको जानकारीका लागी ९८४७१९०२३८ तथा yogibalak99@gmail.com मार्फ़त सूचना दिन सक्नुहुनेछ | धन्यवाद !!
Posted by Kamal Paudyal at 6:49 AM
Labels: फिचर, लेख
Manish Sharma June 7, 2016 at 12:14 AM
Fantastic bro keep it up...